Adobe Flash Player ကို | November 2019
အဓိက Adobe Flash Player ကို
Flash Player ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်မထားဘူး: ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှ5နည်းလမ်းများ
ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီသစ်ကို update ကိုအတူ tool ကို၏ developer များပိတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုအားနည်းချက်များတွေအများကြီးပါဝင်သောကြောင့်ကို Adobe Flash Player ကို, အတည်ငြိမ်ဆုံး plugin ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ ဒါဟာ Flash Player ကို update လုပ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်သောဤအကြောင်းပြချက်အဘို့ဖြစ်၏။ သို့သော်သင်သည်အဘယ်သို့ Flash Player ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါလျှင်ပြီးမြောက်ရန်ပျက်ကွက်?
Flash Player ကို browser ကိုမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး: ပြဿနာများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ
အများအပြားအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်ဖြစ်သောလူကြိုက်အများဆုံးဘရောက်ဇာကို plug-in, တကို Adobe Flash Player ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် plug-in ကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိတွေအများကြီးယနေ့ဖြစ်သည့်ဘရောက်ဇာကို Flash ကို-အကြောင်းအရာအတွက်ကစားရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီနေ့ non-functional ဖြစ်စေ Flash Player ကိုထိခိုက်စေသောအဓိကအချက်များမှာကြည့်ပါ။
"Flash Player ကို၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သော" ကိုးကွယ်ရာအမှား
Adobe Flash Player ကို - browser များရန်လိုအပ်သောအရာကအလွန်ပြဿနာ plugin ကို, Flash ကို-content ကိုတငျပွနိုငျဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးအရာအတွက်အစားသင်က error message ကို "နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုကြည့်ရှုရန် Flash Player ကိုလိုအပ်သည်" မြင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ Flash ကို-content တွေကိုပြသ၏ကိစ္စကိုဆွေးနွေးရန်ပါလိမ့်မယ်။
လျှောက်လွှာမိတ်ဆက်မှားယွင်းနေသည်ကို Adobe Flash Player ကို: ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်း
ပို. ပို. အသုံးပြုသူများကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Flash Player ကို၏ installation စဉ်အတွင်းပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားလာရတယ်။ အထူးသဖြင့်ယနေ့ကျနော်တို့လျှောက်လွှာကိုစတင်ခြင်းအမှားအယွင်းများအတွက် Adobe Flash Player ကို၏အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုစားအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ လျှောက်လွှာမိတ်ဆက်မှားယွင်းနေသည်ကို Adobe Flash Player ကို, များသောအားဖြင့်ကအနည်းဆုံးသူမ၏မျက်နှာအော်ပရာအသုံးပြုသူများ, Mozilla Firefox ကိုအသုံးပြုသူများအကြားတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
လုံးဝကိုကွန်ပျူတာထဲကနေကို Adobe Flash Player ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Adobe Flash Player ကို - သင်မှန်ကန်စွာအမျိုးမျိုးသောကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ posted Flash ကို-content ကိုဖော်ပြရန်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးသင့်ရဲ့ browser ချင်ကြောင်းအထူးကစားသမား။ သင်ဤ plugin ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါရုတ်တရက်အပေါငျးတို့သငျသညျမဆိုပြဿနာများရှိသည်သို့မဟုတ်သင်ရိုးရှင်းစွာမရှိတော့လိုပါလျှင်, သင်ကပြီးပြည့်စုံဖြုတ်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Connection အမှား Flash Player ကို install လုပ်နေချိန်မှာ: အကြောင်းရင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ
Flash Player ကို - အဘယ်သူ၏အလုပ်ကွဲပြားခြားနားသော browser များအတွက် flash ကို-content တွေကိုကစားရန်ရည်ရွယ်နေတဲ့လူသိများတဲ့မီဒီယာပလေယာ။ သငျသညျမျက်နှာပြင်ချိတ်ဆက်မှုအမှားဖော်ပြပေးကို Adobe Flash Player ကို, ကို install ရန်ကြိုးစားသောအခါဤဆောင်းပါးအခွအေနကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ connection အမှားကို install အခါ Adobe Flash Player ကိုစနစ် Adobe ကဆာဗာများ ချိတ်ဆက်. နှင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲ၏လိုအပ်သောဗားရှင်းဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
Flash Player ကိုနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်၏အဓိကပြဿနာများ
ဒါဟာကို Adobe Flash Player ကိုအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တည်ငြိမ် plugin ကိုမပေးကြောင်းအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းထိုကွောငျ့, သငျသညျပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အသုံးအများဆုံးအမှားတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကြိုးစားသူတို့ကို fix ဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆပါလိမ့်မယ်။ installation ကိုအမှားသင်သည်ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ် Flash Player ကို၏ installation စဉ်အတွင်းလျှင်သင်၏ကွန်ပျူတာအတွင်းမည်သည့်ကျန်နေတဲ့ဖိုင်တွေကို Adobe Flash Player ကိုဆက်လက်ဖွယ်ရှိသည်။
Adobe Flash Player ကိုဗားရှင်းစစ်ဆေးလုပ်နည်း
မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်စေရန်, Web browser က Adobe Flash Player ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်တစျခုသောအ Third-party အစိတ်အပိုင်းများ, လိုအပ်သည်။ ဒါဟာကစားသမားသင်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှု Flash ကိုဂိမ်းများကိုကစားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အားလုံးဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အမျှ Flash Player ကိုသည် Periodic မွမ်းမံရန်လိုအပ်သည်။ သင်တို့မူကားတစ်ဦး update ကိုလိုအပ်လျှင်မိမိအဗားရှင်းသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးသားနှင့်ဘာကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် Adobe Flash Player ကိုအလိုအလျှောက်မစတင်ထားဘူး
Flash Player ကို - လူအတော်များများအသုံးပြုသူကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့လူကြိုက်များတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ။ ဤသည် plugin ကိုအင်တာနက်ကိုကြွယ်ဝအပေါ်ထားတဲ့ယနေ့အဆိုပါ browser မှာ Flash-အကြောင်းအရာပြန်ဖွင့်ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီကစားသမားပြဿနာများမရှိဘဲမဟုတ်ပါဘူး, ဒီတော့ Flash Player ကိုအလိုအလျှောက်မစတင်ထားဘူးအဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြည့်ပါ။
"ခလုတ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ကို Adobe Flash Player ကို» start ဖို့ကိုနှိပ်ပါလုပ်နည်း
ဗီဒီယိုကိုကြည့်မတိုင်မီသည့်အခါဖြစ်ကောင်း, များစွာသောပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုချွတ်ယူ "ဟုကို Adobe Flash Player ကိုဖွင့်ဖို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ" ။ အတော်များများနှောင့်အယှက်, ဒါပေမယ့်အတော်လေးအလွယ်တကူလုပ်ပိုကြောင်း, ဒီသတင်းစကားကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံကိုကြည့်ကြကုန်အံ့ပါဘူး။ သင့် browser setting တွင် "ဝယ်လိုအားအပေါ် plug-ins များကို Run" ဟုကို tick စရာရှိသောကြောင့်တစ်ဦးကအလားတူသတင်းစကားကိုပုံပေါ်သည်တဦးတည်းလက်ပေါ်မှာ bandwidth ကိုကယ်တင်တော်မူ၏, နှင့်အခြားသောအသုံးပြုသူအချိန်ဖြုန်းသည်။
Adobe Flash Player ကို update လုပ်ဖို့ကဘယ်လို
Adobe Flash Player ကို - အမျိုးမျိုးသော flash ကို-အကြောင်းအရာများ၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူအများအပြားအသုံးပြုသူများအကျွမ်းတဝင် plug ကို။ အမိန့်ရညျအသှေးအလုပျ plugin ကိုသေချာစေရန်အဖြစ်ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးဖြစ်ရပ်များ၏အန္တရာယ်များကို minimize လုပ်ဖို့မှာ plugin ကိုအချိန်မီထုံးစံ၌ updated ရမည်ဖြစ်သည်။ မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌အရှုံးမပေးချင်သောအများဆုံးမတည်မငြိမ် plugins ကို၏တဦးတည်း, များစွာသောဘရောက်ဇာကိုရောင်းချသူ - Flash Player ကို plug-in ။
Adobe Flash Player ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
အမျိုးမျိုးသော software ကိုထွက်ပေါ်မွမ်းမံမှုများမကြာခဏသူတို့ကိုလိုကျနာဖို့အတှကျကအမြဲမဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း။ ဆော့ဖ်ဝဲအဟောင်းများဗားရှင်းကို Adobe Flash Player ကိုပိတ်ဆို့ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပဲ။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည် Flash Player ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါ။ Update ကိုယာဉ်မောင်းဒါဟာကောင်းစွာ Flash Player ကိုပြဿနာနှင့်အတူသင့်ရဲ့ device အဟောင်းတွေအသံဖိုင်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကားမောင်းသူများမှာဆိုတဲ့အချက်ကိုမှထဖြစ်နိုင်သည်။
အဘယ်အရာကို Adobe Flash Player ကိုအစားထိုးနိုင်သည်
Adobe Flash တကယ်တော့ Player ကို, တစ်လက်ဝါးကြီးအုပ်နှင့်ကောင်းစွာကြောင်း Flash Player ကိုအလုပ်တွေအားလုံးကိုနှင့်အတူရငျဆိုငျမည်ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်တစ်ဦးသင့်လျော်အစားထိုးတွေ့ရှိရန်အတော်လေးခက်ခဲသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ Silverlight ကို Microsoft ကမိုက်ကရိုဆော့ဖ Silverlight ကို - သင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို web applications များ, desktop ပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲ, မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ဖန်တီးနိုင်သည့်နှင့်အတူ Cross-platform နှင့် krosbrauzernaya ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Flash Player ကိုချိန်ညှိခြင်း
HTML5 ကိုနည်းပညာတက်ကြွစွာ Flash ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, ဒုတိယအသုံးပြုသူများကသင့်ကွန်ပျူတာကို Flash Player ကိုအပေါ်ကို install ချင်ဆိုလိုတာကများစွာသောကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဝယ်လိုအားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မီဒီယာကစားသမားများဖွင့် setting ကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြင့်အနည်းငယ်ကိစ္စများတွင်လိုအပ်သော Flash Player ကို, ချိန်ညှိခြင်း: အ plugin ကိုစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြေရှင်းသောအခါ, Equipment (webcam နှင့်မိုက်ခရိုဖုန်း) ၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးများအတွက်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များများအတွက် plugin ကိုဒဏ်ငွေ-စာဘို့။
အဘယ်ကြောင့်သင်ကို Adobe Flash Player ကိုလိုအပ်ပါဘူး
အကယ်စင်စစ်သင်သည် Adobe Flash Player ကို, အစားစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြစ်သောတစ်ခုထင်မြင်ချက်အတိုင်းဤကစားသမားတွေအကြောင်းကြားဖူးတယ်: တချို့ဒီအခြားသူတွေ Flash Player ကိုဆိုကြသည်စဉ်တစ်ခုချင်းစီကိုကွန်ပျူတာထဲမှာ install ရမည်ဖြစ်သည်သောအရေးအပါဆုံးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည် - အလွန်အန္တရာယ်မကင်းရာ။ ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် Adobe Flash Player ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူပါ။
Flash Player ကို Download: Folder တည်ရှိရာနှင့်မည်ကဲ့သို့သူမ၏ဖိုင်များကို "ဆွဲထုတ်" ရန်
Flash Player ကို - တစ်လူကြိုက်များကစားသမားကိုသင်ဂီတနှင့်ပိုပြီးနားထောင်ရန်, ပိုက်ကွန်အွန်လိုင်းဗီဒီယို browse နိုင်သည့်အတူ web browser ကိုမှတဆင့် Flash ကိုအကြောင်းအရာ။ အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်သီအိုရီအတွက်သူတို့က "ဆွဲ" နိုငျဆိုလိုတာက Flash Player ကို, progruzhat နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားမှတဆင့်ပွား။ Flash Player ကိုတဆင့် Viewed ဗီဒီယိုစနစ်ကဖိုင်တွဲထဲတွင်သိမ်းဆည်းနေကြသည်, သင်မူကားဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့ browser ပေါ်တွင် cache ကို၏ set ကိုအရွယ်အစားကသူတို့ကိုဆွဲထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကွဲပြားခြားနားသော browser များပေါ်ကို Adobe Flash Player ကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လို
မည်သည့် browser မှာအွန်လိုင်းအလုပ်လုပ်အသုံးပြုသူအားလုံးက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုမှန်ကန်စွာပြသမည်ဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းထားသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲကို default browser ကိုစနစ်တကျမဆိုအထူး plug-ins များကိုမပါဘဲအပေါငျးတို့သ contents တွေကိုပြသနိုင်ခဲ့ဘူး။ အထူးသဖြင့်ယနေ့ကနျြောတို့ activation plugin ကို Adobe Flash Player ကိုထွက်သယ်ဆောင်ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
Adobe Flash Player ကို - အမျိုးမျိုးသောက်ဘ်ဆိုဒ်များတွင် flash ကို-content တွေကိုကစားရန်လိုအပ်ကြောင်းသူကမ္ဘာကျော်ကစားသမား။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဒီ plugin ကို, ဤမျှလောက်များစွာသော flash ကို-ဂိမ်းများ, ဗီဒီယို, အသံဖိုင်ရှိသည်မဟုတ်မူလျှင်, အပြန်အလှန်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေရိုးရှင်းစွာ browser မှာပြသမည်မဟုတ်ပါ။
ထိုပြဿနာများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ: သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Flash Player ကိုမတပ်ဆင်ရသေး
Plug-in ကို Adobe Flash Player ကို - browser များအတွက်လိုအပ်သောအရေးပါတဲ့ tool ကို Flash-content တွေကိုဆော့ကစားနိုင်ခဲ့ကြတယ်: အွန်လိုင်းဂိမ်း, ဗီဒီယိုများ, အသံသွင်းထားနှင့်ပိုပြီး။ ဒီနေ့ Flash Player ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားမထားအတွက်အသုံးအများဆုံးပြဿနာများ၏တဦးတည်းကိုကြည့်။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Flash Player ကို install လုပ်မရအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်အများအပြားရှိပေမည်။
https://termotools.com my.termotools.com © Adobe Flash Player ကို 2019